Kartuuniste aflagaado u geystey Nebi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Denmark | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Kartuuniste aflagaado u geystey Nebi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Denmark
Nin u dashay dalka Denmark oo lagu magacaabo Kurt Westergaard oo sawirro uu ku sheegay Nebi Maxamed (NNKH) ay aad uga caroodeen Muslimiinta caalamka, ayaa ku geeriyooday da’da 86 jir.
Qoyskiisa ayaa sheegay in uu u geeriyooday xanuun muddo hayay, sida uu ku warramay wargeyska Berlingske.
Westergaard ayaa horraantii 1980-meeyadii ku biiray wargeyska dalkaas ka soo baxa ee Jyllands-Posten, isagoo u qaabilsanaa sawir gacmeedka.
Waxa uu soo caan-baxay sanadkii 2005, markii uu wargeyskaas ku daabacay sawir gacmeed uu ku sheegay Nebi Maxamed.
Sawirka ayaa kamid ahaa 12 sawir gacmeed oo uu wargeyska uga hadlayay faafreebka warbaahinta iyo in dhaliil loo jeedin karo Islaamka.
Arrintaas ayaa ka caraysiiyay Muslimiinta caalamka, waxaana cabasho xooggan Denmark u gudbiyay safiirrada dalalka Muslimiinta ah u fadhiya waddankaas.
Rabshado ka dhashay sawir gacmeedka ayaa bishii February ka dhacay dalal badan oo Muslim ah. Waxaa la weerarray safaaradaha ay Denmark ku leedahay tiro waddamo ah, halka tobanaan qof ay ku dhinteen rabshadaha.
Wargeyska Charlie Hebdo ee ka soo baxa caasimadda Paris ayaa qaatay go’aan noocaas ah, waxaana uu daabacay sawirro uu ku aflagaadeeyay Nebi Maxamed. Sanadkii 2015, weerar lagu qaaday xarunta wargeyskaas ayaa waxaa lagu dilay 12 qof.
Waxay igu yiraahdeen “Waxaad aflagaadeyseen Nebiga” (NNKH)
Noolashii adkeyd ee Westergaard
Westergaard ayaa marar badan loogu hanjabay dil, waxaana lala beegsaday isku day lagu khaarajinayay.
Markii hore waxa uu go’aansaday in uu ku noolaado goob qarsoodi ah, kadibna waxaa uu si caadi ah u deganaa xaafad si weyn loo ilaaliyo oo ku taal magaalada Aarhus, oo ah tan labaad ee ugu weyn Dermark.
Sanadkii 2008, hay’adda sirdoonka Denmarka ayaa sheegtay inay xirtay saddex qof oo lagu eedeeyay inay dili rabeen Westergaard.
Laba sano kadib, booliska Denmark ayaa meel u dhaw hooyga Westergaard ku qabtay 28 jir Soomaali ah oo ku hubaysnaa toori.
Ninka oo lagu magacaabo Maxamed Geelle ayaa lagu helay dembiyo ah isku day dil iyo argagixisannimo, waxaana sanadkii 2011 lagu xukumay sagaal sano oo xabsi ah.
Sanadihii u dambeeyay, Westergaard ayaa ku noolaa goob qarsoon, isagoona lahaa ilaalo gaar ah.
Previous articleDowlada Federalka oo muddo 3 cisho ah fasaxday shaqaalaha Dowlada
Next article60-kun oo Xujey oo maanta taagan Buurta Carafo.